Maria Goodin: Munyori wenyaya imwe chete? Nhema dzako dzinotapira | Zvazvino Zvinyorwa
Maria Goodin Munyori wemumwe mutambo?
Kunyepa kwako kutapira: Nyaya yakaoma pakati pegastronomic zvinofadza.
Mary Goodin akatipa mukati 2013 Kunyepa kwako kutapira. Mune izvi, kusvika zvino nyaya chete, akadurura moyo wake uye neruzivo rwake semuzvipiri kunzvimbo yekurwara nepfungwa.
Pane nguva apo vanhu vane nyaya yekuudza nyika uye imwe chete. Panyaya yaGoodin, aibata nemutambo wemagariro munhau yekudya, akavaka imwe nyaya, umo chokwadi chinosanganiswa nenhema, zvinokamura, zvinopatsanura uye zvinova zvinomusunga nekureruka kunokochekera.
1 Maria Goodin ndiani?
2 Ndiani wedu aigona kuvimbisa chokwadi chezviyeuchidzo zvake?
3 Chii chichaunzwa neramangwana kubva kuna Goodin?
Maria Goodin ndiani?
Maria akaberekerwa muEngland, kwaanoramba achigara, muHertfordshire. Nedhigirii mumabhuku echirungu, akashanda semutungamiriri, mudzidzisi uye muto wekurapa wekusimbisa. Veruzhinji Kunyepa kwako kutapira kuEngland nemusoro wenyaya Nutmeg, yakavakirwa pane imwe nyaya ine zita rimwe chete, yakateverwa muAustralia nemusoro wenyaya Mwanasikana weMutauri uye gare gare muUnited States ine zita racho Kubva kuKicheni cheHafu Chokwadi. Mushure mekushambadzirwa munyika dzinotaura Chirungu, yakashandurirwa muchiItaly, ChiGerman, ChiSwedish, neSpanish.
Ndiani wedu aigona kuvimbisa chokwadi chezviyeuchidzo zvake?
Isu tinoziva sei kuti zvinhu zvatinorarama ndezvechokwadi kana chibereko chekufungidzira kwedu?
Kunyepa kwako kutapira Iri ibhuku revaya vaunoverenga masikati, mukati mawo mapeji anotendeuka usingazvizive apo iwo madhoo ane izvo zvinonzwa achivhurwa uye nzara ichikura kuenderera ichipinda murungano. Iyi haisiri iyo chete nzara iyo inogadzira nekuti gastronomic inofadza inova imwe protagonist.
Iyo novel haina mavara zvakadzika, isu tinovaziva chete kusvika padanho ravanoshanda sekutsigira nyaya iyo Maria anoda kutaura. Ivo havasi vatenderi mavara uye zvakadaro ivo vanove chisingakanganwiki kunyangwe nguva ikapfuura uye mamwe mabhuku anotora nzvimbo inowanikwa kwazvo mundangariro medu.
Iye protagonist, Meg, ane shungu nesainzi uyo akakurira pakati pekunhuwirira kwechikafu uye magirazi anopinda pachitofu chaamai vakaputira hudiki hwavo mukufungidzira uye ngano. Iyo inoshamisa uye inoshamisa nyika mairi amai yavakamurera sekunge vaive Alice muWonderland, yakangomuunzira kunyangadzwa kubva kune avo vekuchikoro kwavo vakatanga kumuseka.
«Mukurangarira kwangu kwekutanga ndiri mudiki kwazvo uye ndakagara pakicheni nekamuri naamai vangu vava kuda kucheka bhinzi dzinokwira. Pakarepo vanopunyuka kubva mumaoko avo uye ivo vanotanga kukwira kumusoro iyo fanicha
Ichokwadi chakavharwa murudo uye mukufungidzira
Nepo vanhu vakuru vazhinji vachipotsa inofungidzira nyika yehudiki, Meg anoona zvichinetsa kusiyanisa izvo zviri zviitiko zvake zvehucheche uye ndedzipi nyaya dzaifungidzirwa naamai vake kwaari. Iye haazivi kuti hwaive sei hudiki hwake, saka haadi kutaura nezvazvo. Anotya kuzvisiyanisa pamwe nekufunga kwakanaka kwevanhu vakamukomberedza. Semunhu mukuru mukadzi haudi kunzwa chero chinhu chisingatsanangurike nechikonzero, unoda chengetedzo inopihwa nemusoro. Kusahadzika kwavo uye kushuvira kwavo kunamatira kune izvo zvinogoneka, zvinoita kuti tishamise kuti mangani ezvinhu zvatinorangarira ndezvechokwadi, mangani chibereko chezvavakatiudza uye kuti ndangariro yedu yakamisikidzwa seyayo, uye musanganiswa mangani pakati pezviviri.
Kushungurudzika kwaMeg naamai vake kuchapa nzira mukuwanika kweicho chokwadi nekuchenjera kwakapfekedzwa neketeni rekunyepedzera iro amai vake vakamuputira naro semwana. Ndiyo nyaya inotapira sekugara kwayo, dhaini isina kubatana, ine mutinhimira uye inogara ichiitika, iyo inotaura nezverudo kupfuura zvinhu zvese uye izvo zvinotidzidzisa kuti ndangariro uye chokwadi hazviwanzo kufanana, asi zvinoitawo kuti tinzwisise izvozvo izvo hazviite kuti ndangariro isanyatso kuva yechokwadi kana kuti chokwadi chive chechokwadi. Zvezviri nani uye zvakaipa, isu tinorarama uye tinonzwa zvinotendwa nehuropi hwedu: Kunyangwe zvakaitika kana kuti hazvina basa.
Iyo nyaya yekuverenga wega, wakagadzirira kuseka, kuchema, kufara. Kutenda kuti runako rwemunhu runogona kupenya pane huipi hwenyika kunyangwe isingakwanise kuipedza.
Chii chichaunzwa neramangwana kubva kuna Goodin?
Ndinoda kuverenga Maria Goodin zvakare, pamwe ndinoda nguva yakawanda kana pamwe izvi zvaive yake chete nyaya, chipo chake kuvana vese vanokurira munzvimbo yavasingafanirwe kugara, mutero wake kuna vese vanaamai vanodzivirira vana vavo mumamiriro akaipisisa. Kana zvirizvo, maita basa neruzivo, Maria. Ngazvive sezvazvingave, zvakakwanisa kuumba chitsauko chedu chekare, kunyangwe dzimwe nguva tinogona kufunga kuti isu takango fungidzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Maria Goodin Munyori wemumwe mutambo?
XXIII Forqué Awards: _Munyori_ uye _The bookstore_. Uye mamwe mazita ezvinyorwa.